Sebenzisa kunye nokuCwangcisa uLawulo lweAkhawunti yoMsebenzisi (UAC) kwi Windows 10
Ngu-Ciprian Adrian Rusen
Ulawulo lweAkhawunti yoMsebenzisi (UAC) luphawu lokhuseleko olunceda ukuthintela utshintsho olungagunyaziswanga lwakho Windows 10 ikhompyuter okanye isixhobo. Olu tshintsho olungagunyaziswanga lunokuqaliswa ngabasebenzisi, iiapps, ii-virus, okanye ezinye iintlobo ze-malware. I-UAC iqinisekisa ukuba olu tshintsho lwenziwa kuphela ngemvume yomlawuli. Ukuba olu tshintsho aluvunywanga ngumlawuli, alunakuze lwenziwe, kwaye inkqubo iya kuhlala ingatshintshanga.
Iiapps zeDesktop kwi Windows 10 musa ukuqhuba neemvume zomlawuli kwaye ngenxa yoko ayinakwenza utshintsho oluzenzekelayo kwinkqubo yokusebenza. Xa iapps yedesktop ifuna ukwenza utshintsho lwenkqubo (ezinje ngokulungisa ezichaphazela ezinye iiakhawunti zomsebenzisi, uhlengahlengiso lweefayile zenkqubo kunye neefolda, okanye ukufakwa kwesoftware entsha), Windows 10 Imiba ebizwa ngokuba yibhokisi yencoko yababini yokuqinisekisa ye-UAC, apho abasebenzisi banokuqinisekisa ukuba ufuna ukuba kwenziwe olo tshintsho.
Ukuba umsebenzisi ucofa u-Hayi, utshintsho aluyi kwenziwa. Ukuba umsebenzisi ucofa u-Ewe, usetyenziso lufumana iimvume zomlawuli kwaye lwenze utshintsho lwenkqubo olucwangcisiweyo ukuba lwenziwe.
Ulawulo lweAkhawunti yoMsebenzisi (UAC).
Ezi mvume ziya kunikwa de insiza iyeke ukusebenza okanye umsebenzisi ayivale.
Ngaba i-folic acid ilungile kuwe
Xa usebenzisa iiVenkile zeVenkile yeWindows, i-UAC ayikhe ibangelwe kukuba, kuyilo, eziapps azinakutshintsha iisetingi zenkqubo okanye iifayile.
Ukuba ukwikhompyuter etshixiweyo kwaye iakhawunti yakho yomsebenzisi ayinayo imvume yomlawuli, inyathelo le-UAC likucela ukuba ufake ipassword yeakhawunti yomlawuli. Ukuba awuchwethezi igama elichanekileyo lomlawuli, awungekhe ukwazi ukusebenzisa ii -apps zedesktop ezifuna iimvume zomlawuli.
Ukunyanzelwa kwe-UAC kwiakhawunti evaliweyo.
Xa udibana ne-UAC, kubalulekile ukuba ubanike ingqalelo. Jonga ulwazi olubonisiweyo kwaye ubone ukuba loluphi usetyenziso olufuna iimvume zomlawuli. Ukuba ayisiyiyo insiza oyiqalileyo kwaye ufuna ukuyisebenzisa, cofa u-N.
Kuxhomekeka kwindlela ekumiswe ngayo inethiwekhi yenkampani yakho, unakho okanye unganakho ukutshintsha indlela esebenza ngayo i-UAC. Ukuba ukwinkampani encinci engenayo i-domain yenethiwekhi enemigaqo kunye nemigaqo-nkqubo ebekwe ngumlawuli wenethiwekhi okanye isebe le-IT, unokukwazi ukutshintsha indlela i-UAC eboniswa ngayo. Landela la manyathelo:
imvubelo yerayisi ebomvu
Cofa kwibhokisi yokukhangela kwibar yomsebenzi.
Uluhlu lweziphumo zophando ziyavela.
lithetha ntoni isiqingatha sobomi
Cofa Guqula Useto loLawulo lweAkhawunti yomsebenzisi.
Ifestile yoLawulo lweAkhawunti yoMsebenzisi iyavela.
Cwangcisa utshintsho lwe-UAC kwindawo oyifunayo.
Unokukhetha enye yezi ndlela zilandelayo:
Soloko wazisa .
Unyango lwe-UAC luboniswa xa ii -apps zizama ukufaka isoftware okanye ukwenza utshintsho kwikhompyuter yakho naxa uzama ukutshintsha useto lweWindows. Idesktop iyancipha xa kuboniswa i-UAC.
Ndazise kuphela xa iiapps zizama ukwenza utshintsho kwikhompyuter yam.
Oku kukuseta okungagqibekanga kwe-UAC. Izinyanzeliso ze-UAC aziboniswa xa uzama ukwenza utshintsho kuseto lweWindows. Idesktop iyancipha xa kuboniswa i-UAC.
Ndazise kuphela xa ii -apps zizama ukwenza utshintsho kwikhompyuter yam (sukuyicima idesktop yam).
Izilumkiso ze-UAC aziboniswanga xa uzama ukwenza utshintsho kuseto lweWindows, kodwa i-Desktop ayincitshiswanga xa kuboniswa isikhawulezisi se-UAC.
Oku kulingana nokucima i-UAC. Akucetyiswa ukuba usebenzise olu seto.
Umyalelo woLawulo lweAkhawunti yoMsebenzisi uyaboniswa.
Useto lwakho luyasetyenziswa.
isetyenziselwa ntoni i-ghb
Ungazifaka njani izixhobo ze-vmware
Ngaba ikhona i-generic epipen
ubala njani umda wegalelo
Uyenza njani igrafu parabola